Archive du 30-juil-2021
Ny tody tsy misy fa…
Tao anatin’ity fitondrana Rajoelina ity no betsaka indrindra ny toe-javatra mamohehitra na “scandales” miseho. Toa niniana tsy noraharahiana, ary niaraha-naheno teto ny hoe: “izahay aloha izao no mitondra”. Fady
GUINÉE EQUATORIALE SY FRANTSA MIFANDRAMATRA NOHO NY RESAKA FIANDRIANANA
Angidim-by iray an’ny tafika Frantsay nipetraka tao amin’ny tanànan’I Bata, tanàn-dehibe faharoa any Guinée ny alarobia teo. Tsy navelan’ny manam-pahefana hihetsika io, ary nosamborina ireo miaramila 6 tao anatiny.
Antananarivo renivohitra Nitombo 8 % ireo afaka BEPC
Nitombo 8 % ireo mpiadina afa-panadinana BEPC teto amin’ny fari-piadidiam-pampianaran’Antananarivo renivohitra. Raha 51,73% mantsy izany tamin’ny taon-dasa dia nahatratra 59,77 %
Hentitra ny Kardinaly « Tsy manao politika ny Fiangonana »
Manoloana ny toe-draharaha misy eto amin'ny Firenena dia nisy ny dinidinika nifanaovan'ireo solontenan'ny fiangonana Katolika, izay notarihin'ny Kardinaly Désiré Tsarahazana,
Tantsoroka avy amin’ny CNaPS Mpikambana very asa 849 nisitraka fanofanana
Mpiasa very asa miisa 849 no efa nisitraka fampiofanana avy amin’ny CNaPS tamin’ny alalan’ireo mpiara-miombon’antoka aminy, mba ho tantsoroka sy famerenana azy ireo indray eo amin’ny tontolon’ny asa,
Taxi be eny Antanimena sy ny manodidina Mbola maro ireo tsy mahalala ny toby fiantsonany
Mbola velon-taraina hatrany hatramin’ny omaly ireo mpandeha taxibe mampiasa iny lalana eny Antanimena sy ny manodidina iny
Madagascar Orchestra Mikasa hanangana orikesitra goavana indrindra
Nampahanfantatra tetsy amin’ny hotely Carlton Anosy omaly ny fikambanana mpiangaly ny mozika klasika Malagasy, Madagascar Orchestra,
Raharaham-pirenena Mikorontana ambony ambany
Inoana fa manomboka eto dia tsy hisy ho sahy hilaza intsony na ny avy amin’ny hery mpanohitra ny fitondrana na ny avy amin’ny hery manohana azy fa mbola iray tsy mivaky na ny andaniny na ny ankilany.